नेपालका प्रख्यात कवि नवराज पराजुली ‘सिक्किम साहित्य उत्सव-2021’को समापनमा सिक्किम आउने – Sikkim Journal
गान्तोक, 13 नोभेम्बर। राजधानी गान्तोकमा विभिन्न साहित्यिक, लेखन, वाक पटुता अनि चित्रकारितासँगै ‘सिक्किम साहित्य उत्सव 2021’ को आयोजना भइरहेको छ। यस अवसरमा विभिन्न साहित्यिक गतिविधिहरूका साथै साहित्यको क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुऱ्याउॅंदै आएका वरिष्ठ व्यक्तित्वहरूलाई सम्मानित गरिने छ। उक्त कार्यक्रममा राज्यका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङ मुख्य अतिथिको रूपमा उपस्थित रहनेछन्। यसरी नै यस कार्यक्रमको आकर्षण भने नेपालका ख्यातिप्राप्त कवि नवराज पराजुली रहनेछन्।
साहित्य उत्सवलाई लिएर आयोजित सभा
समारोह आयोजन समितिका अध्यक्ष आरके वालिङले आज आयोजित एक संवाददाता सम्मेलनमा बताए अनुसार हाम्रो वार्ता टेलीभिजनको स्थापनाको दोस्रो वर्षगॉंठको अवसरमा आगामी 26 नोभेम्बरको दिन राजधानीस्थित मनन केन्द्रमा ‘सिक्किम साहित्य उत्सव 2021’ आयोजन गरिने छ। राज्यका विद्यार्थीहरू र युवा पीढ़ीलाई साहित्य अनि पठन संस्कृतितिर प्रोत्साहित गर्न विभिन्न साहित्यिक प्रतियोगिताहरू आयोजना गरिने छ। एउटा मञ्च पनि प्रदान गर्ने उद्देश्यले यी प्रतियोगिताहरूमा राज्यभरिकै विभिन्न स्कूलका विद्यार्थीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गरिने छ।
प्रतियोगिता अन्तर्गत तीन वर्ग पहिलो आठौं कक्षासम्म, दोस्रो कक्षा 9औं देखि 12औं सम्म र तेस्रो 12औं देखि माथि कक्षाका विद्यार्थीहरूको निम्ति नेपाली र अंग्रेजी भाषामा कविता प्रतियोगिता राखिएको छ। दुई वर्ग पहिलो आठौं कक्षासम्म र दोस्रो कक्षा 9औं देखि 12औं सम्मका तीन विजेतालाई क्रमश: 10 हजार,7हजार र5हजार पुरस्कार स्वरूप प्रदान गरिने छ। यसरी नै 12औं देखि माथि कक्षा वर्गको प्रतियोगिताका विजेताहरूलाई क्रमश: 15 हजार, 10 हजार र 8 हजार पुरस्कार प्रदान गरिने छ।
यसरी नै वाक पटुता प्रतियोगिता 12औं कक्षासम्मका विद्यार्थीहरूको निम्ति नेपाली र अंग्रेजी भाषामा आयोजन गरिने छ। प्रतियोगिताका तीन विजेतालाई क्रमश: 10 हजार,7हजार र5हजार प्रदान गरिने छ। कक्षा 10औं सम्मा र कक्षा 11औं देखि स्नातक तहसम्मका विद्यार्थीहरूको निम्ति चित्रकला प्रतियोगिता पनि राखिएको छ। कक्षा 10औं सम्मका तीन विजेतालाई क्रमश: 10 हजार,7हजार र5हजार तथा कक्षा 11औं देखि स्नातक तहसम्मका तीन विजेतालाई क्रमश: 15 हजार, 10 हजार र7हजार रूपियॉं प्रदान गरिने छ।
अध्यक्ष वालिङले उक्त सबै प्रतियोगिताहरू प्रथम चरणमा अनलाइन सम्पन्न गरिने र त्यस मध्ये उत्कृष्ट 10 प्रतिभागीलाई चयन गरेर राजधानी गान्तोकमा अन्तिम चरणको प्रतियोगिता आयोजन गरिने जानकारी दिए। 26 नोभेम्बरको दिन सबै विधाका एक-एक विजेतालाई आफ्नो प्रस्तुति दिन अवसर प्रदान गरिने छ। उक्त दिन नेपाल निवासी कविता संसारका एक सेलिब्रेटी नवराज पराजुलीले पनि आफ्नो विशेष प्रस्तुति दिनेछन्।
कार्यक्रममा सिक्किमका सबै साहित्यकारहरू तथा दार्जीलिङका साहित्यकारहरूलाई पनि निम्त्याइएको अध्यक्ष वालिङले थप जानकारी दिए। कार्यक्रमको दिन साहित्यको क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान दिॅंदै आएका सिक्किमका केएन शर्मा र बिनाश्री खरेल, दार्जीलिङका गुप्ता प्रधान र कालेबुङका डा. राजेन्द्र भण्डारीलाई अभिनन्दन गरिने छ। यसरी नै सिक्किमबाट प्रवीण राई जुमेली, दार्जीलिङबाट पवित्र लामा र कालेबुङबाट मनोज बोगटीले कविता वाचन गर्नेछन्।
यस अतिरिक्त सहायक प्राद्यापकद्वय सूचन प्रधान र डा. आशिष लेप्चाले जानकारी गराए अनुसार पॉंचवटा नेपाली र तीनवटा अंग्रेजी पुस्तकमाथि निरूपण प्रतियोगिता पनि राखिएको छ। यो प्रतियोगिता खुल्ला रहेको छ। दुवै वर्गका विजेताहरूलाई क्रमश: 15 हजार, 10 हजार र7हजार रूपियॉं प्रदान गरिने छ। इच्छुक प्रतिभागीहरूले 18 नोभेम्बरसम्म आफ्नो निरूपण पठाइ सक्नु पर्नेछ। उल्लेख गरिन्छ कार्यक्रमको आयोजन हाम्रो वार्ता टेलिभिजनले आफ्नो दोस्रो स्थापना दिवसको अवसरमा गरेको हो।